के लेख्नु मैले पऱ्यो ! « News of Nepal
के लेख्नु मैले पऱ्यो !
राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको निधन भएको छ । मंगलबार साँझ ५ बजेर ५५ मिनेट जादा उनको निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको हो । राष्ट्रकवि घिमिरेको १०२ बर्षको उमेरमा काठमाडौं कपुरधारास्थित निजी निवासमा निधन भएको हो ।
उनको जन्म विं सं. १९७६ असोज ७ गते लमजुङको पुस्तन गाउँमा भएको थियो । घिमिरे स्वच्छन्दतावादी भावधारा र परिष्कारवादी शैली भएका कुशल नेपाली साहित्यकार, कवि र गीतकार हुन् । उनले साहित्यका कविता, खण्डकाव्य, गीतिनाटक, कथा, अनुवाद लेख-प्रबन्धजस्ता अनेकौं विधा-उपविधाहरुमा निरन्तर कलम चलाउदै आएका थिए ।
नव मञ्जरी, गौरी (शोककाव्य), मालती मङ्गले (गीतिनाटक), हिमालपारि हिमालवारि (गीतिनाटक), उनले राजेश्वरी, इन्द्रकुमारी, राष्ट्रनिर्माता किन्नर(किन्नरी (गीतसङ्ग्रह), चारु चर्चा (निबन्ध), आफ्नो बाँसुरी आफ्नै गीत (निबन्ध) उनका चर्चित लेखहरु हुन् ।
गौरी (शोककाव्य) मध्येः के लेख्नु मैले पऱ्यो !
छाया आज पऱ्यो, छिप्यो छवि कहाँ, के देख्नु मैले पऱ्यो
आँसूमा अब चिप्लियो कलम यो, के लेख्नु मैले पऱ्यो !
मेरीलाई म देख्छु झल्झल, त्यही टाँसिन्न यो पत्रमा
वैरीलाई समेत लेख्न नपरोस् यस्तो अरु के भनूँ !
-स्व. माधब प्रसाद घिमिरे ।
२८ वर्षको उमेरमा आफूलाई भन्दा बढी माया गर्ने धर्मपत्नी गौरीलाई गुमाएपछि घिमिरेले शोककाव्य नै तयार पार्नुभयो ‘गौरी’ । गौरी पढेर आँखा नरसाउने कमै होलान् । टुहुरा छोरीहरु कान्ति र शान्तिको छटपटी मात्रै होइन, गौरीको कल्पनामा आफू डुबेको कुरा ‘गौरी’मा समेट्नुभएको छ ।
‘मान्छे अचम्मको छ । मिठो दालभात तरकारी छ, तर तपाईँलाई अलिकति पिरो किन चाहियो रु जीवनमा सुखैसुख भएर मात्रै पनि हुँदैन । विरह पनि चाहिन्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरो कसैको दुःखमा कठै भनिन्छ कि भनिन्न रु कठैबरा विरह मन पलाएरै भन्या हो नि, होइन त रु सकभर विरह कसैलाई भोग्नु नपरोस् । पर्यो भने सबैले मिलेर समाधान गर्नुपर्छ, बिर्सन पर्छ । सबैलाई विरहै–विरह परोस् पनि भन्या होइन । विरह नथप्नुस् । तपाईँले कहिलेकाहीँ बाजा बजेको सुन्नुहुन्छ । गन्धर्वको सारङ्गी र्‍याइँर्‍याइँ अथवा उस्तादको आलाप । अथवा भ्वाइलिन रोएजस्तो । त्यो सुन्नुभयो भने मात्रै तपाईँलाई राम्रो लाग्छ । यसको अर्थ रुनु मात्रै होइन, हाँसो खुसी पनि हो ।
कविताले सबैलाई स्वीकार गर्छ । दुःख पनि स्वीकार गर्छ । सानो मान्छेलाई ठूलो मान्छेलाई भन्दा महत्व कविताले दिन्छ । कविताको किसिम नै अलग हुन्छ । कला साहित्यको कामै त्यस्तै हुन्छ । सानो एउटा टुक्राले पनि रुवाइदिन्छ । तपाईँ कथा पढ्दै जानुहुन्छ, तर एउटा ठाउँमा तपाईँको बररर आँसु आइदिन्छ ।
झापालाई १२ वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर
जन्मदिनकाे अवसरमा विपन्न परिवारलाई खाद्य सामाग्री वितरण